Sidee Travel Student By tareenka In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sidee Travel Student By tareenka In Europe
Ardayga Travel By tareenka ee Europe ma noqon karo oo keliya xiiso leh, laakiin waxbarashada iyo kobcin, sidoo kale. Xitaa more muhiim ah in arday badan (iyo waalidka) dhif qabaa waa wax ku ool ah oo dhan, ardayda xirfadaha maamulka nolosha u baahan tahay si ay u bartaan si ay u noqdaan kuwo madax bannaan oo, is-tilmaanka, masuul ka, grownups soo jeedin! Solo Safarka Student By tareenka ee Europe muujin karto inaad ka badan oo kaliya indhaha u qurux badan.
Barashada maraan noloshaada gaarka ah, guud, waa sida ay muhiim u ogayn wixii aad jadwalka waxaa loogu talagalay Jaamacadda. Waxaad aan ka fikiri karaa in helitaanka si toos ah ee A, haddii aadan aqoon sida aad u tareen, maamul miisaaniyad, ama xitaa nadiifi dharkaaga! A hab fiican si ay u bartaan naftaada halka isagoo waqti fiican waa in ay ku safraan tareen ee Europe. Waa fog habka ugu fudud oo ay si hareeraha ka heli iyo waxa aad helaysaa waqti aad ku xisaabiso aad u dhaqaaqo soo socda halka riyaaqayaa view qurux badan. Sidaas, safar oo ay bartaan waxa ay la mid halkaas dunida dhabta ah. Waxaan idin siiyey qaar ka mid ah fikradaha in aad bilowday.
Our Travel Student ugu horeysay by tareenka waa: Ku raaxayso Kulanka A By reebin The
Safarka Ardayda ee Tareenka ee Yurub kaliya ma aha wax la yaab leh oo xiiso leh laakiin haddii aad caqli leedahay sidoo kale waa bilaash! Wax waa arrin naadir ah in Paris! Midhadh a dhalooyin yar oo raqiis ah oo khamri ah iyo madaxa in reebin in ay ku raaxaystaan ​​kariimka ee dalagga on goobta jazz Paris. Ardayga Travel By Tareen in Paris waa super fudud, xataa haddii aadan ku hadlin luqadda!
Booqo Frederick Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf, iyo Oscar Wilde oo jooga Xabaalaha Pere Lachaise in Paris, France
Waxaan aadan eedayn haddii aad u malaynayso in this mid ka mid ah waa wax yar la yaab leh, laakiin Pere Lachaise xabaalo dhab ahaantii waa weyn! Talooyin: Entry waa lacag la'aan; download map a taleefankaaga ama kaniinigaaga ka hor intaadan u tagin qabuuraha caanka ah.
Daryeel 4 Orso ee Croatia
Safarka Student By tareenka ee Europe noqon kartaa in ka badan oo kaliya madadaalo. Sida ardayga, waxaa muhiim ah in ay qaataan waqti ay si aad u ogaato hamiday ama dib u siiyo! Hadaad waqti kahesho fasaxyada, sababta ma? Haddii aad raadineyso weeyna daqiiqado dareento-wanaag qaar ka mid ah, qaado waqti aad raacayso tareen si Croatia oo booqasho Kuterevo. xerada qaxootiga A for orso oo brown kuwaas oo u baahan kaalmo si ay u dib-u-galay duurka. Ku raaxayso ciyaaro, quudinta, ama kaliya daawashada xayawaanadan quruxda badan.
La hareereeyey by dhicin in zoo Amsterdam ee, Holland
Inkasta oo aynu ku jirno ku saabsan mowduuca ee dabiiciga ah, joogsiga xigaa waa beerta xayawaanka ee Amsterdam. Waxay ku taallaa in ay xayawaanka magaalada waa aqalka dhirta lagu koriyo oo weyn oo ay ka buuxaan balanbaal qurxoon. A waayo-aragnimo dhab ah u gaar. zoo waxa uu sidoo kale leeyahay xayawaanka kale, sida sloths, kangaroos, iyo Jaguars! tip: Xilliga kuleylaha waa furan yahay ilaa qorraxdu dhacdo waxayna leeyihiin xaflado 6-8 pm khamri.
Cab ee igluu ah, nooc ka mid ah, at Bar Absolut Ice ee Stockholm, Sweden
Stockholm ee Ice Bar, kaas oo ka furmay 2002, waa laga yaabaa in soo jiidashada ugu damaashaaday khamriga ee Sweden. Waxaa soo jiideen 70,000 Kooxda martida ah ee ay sanadka ugu horeeya, ayaa la ciyaaray on the BBC iyo CNN, ayaa ku badan yihiin dadka caanka ah sida Pierce Brosnan iyo Sweden ee u gaarka ah Stellan Skarsgård. Meeshu run ahaantii ma siiyaan macne cusub in weedha ah “on dhagaxyada” Si aad u buuxiso waayo-aragnimo ah, cabitaanka waxaa xataa soo shaqeeyay godkii xabadaha baraf, on bar ah blocks baraf cad dhigay! Waa maxay sababta aan u kordhiyo aad Travel Student By tareenka Yurub by codsanaya shaqo fasax halkan. Marka aad tahay arday, sida runta ah dunida waa lohod.
Booqo Bruges, Belgium sida safarka kale ee Ardayda ee Tareenka
Bilow off aad joogtid Belgium kula safar of Bruges. Bruges waa magaalo yar oo ku yaalla bari ee Belgium. Picture cobbled haad iyo kanaalada dreamy, iyo god suuqa iyo jiidh iyo munaarado bararka, kiniisadaha taariikhiga ah, oo masaakiinta la caddeeyey jir. Waxaa jira gaar ah a soo jiidashada in guga marka daffodils rooga barxadda xasilloon ee dib u gurasho ka begijnhof taariikhi ah, ama in jiilaalka (marka laga reebo Christmas) marka aad yeelan kartaa heer sare haddii baraf, Magaalo ku dhowaad naftaada.
booqasho delirium Cafe
Haddii aad tahay raadinayso more xisbiga a, ka dibna ku boodaan on tareen si ay u Brussels sida walaalahooda kale Travel Ardayga by tareenka, iyo booqasho delirium Cafe halkaas oo ay ku leeyihiin 2500 noocyada kala duwan ee biirka on tuubada! Waa mid aad u fudud si aad u hesho. Waxaad aan ka maqnaan karaa calaamada darsan faragelintii ee maroodiga ee pink.
Tag xisbi ee Ibiza, Spain
Waxyaalaha qaarkood aad kaliya u cararo kartaa marka aad da 'yar tahay, xafladeyn habeenkii(s) marti Ibiza waa mid ka mid ah! U bood on tareen si Ibiza ee furitaanka ama xiritaanka toddobaadkii waayo-aragnimo dhab ah! Labadan toddobaad, ah furitaanka ka dhacaya ee May iyo xiritaanka ee August / September, marti fanaaniinta aduunka weyn oo dhan adduunka oo dhan ka.
Tag jasiirad, Horyaalka Music Festival Yurub In Budapest, Hungary
Haddii aad tahay taageere weyn u ah ciidaha music waa in aad Sziget mudnaan. Sannad kasta this iid muddo todobaad ciyaara ciidankii falalka caalamiga weyn Waxaad kartaa xerada waxaa at, ama joogaan Budapest waxa xaqa ah dhagax la tuuro sida iidda qaadataa meel on jasiirad bartamaha magaalada! iyo arday badan oo adiga oo kale ah ayaa Safarka Ardayga ee Tareenka ku tagaya.
Tag Ugaarsiga Ruuxa In Edinburgh, Scotland oo ah Safarka Ardayda ee Tareenka
Far hoos ku wadooyinka mashquulka Edinburgh waxaa been madow ah, xasilloon, meel illoobi. In bartamihii 1980-set oo ah dhulka hoostiisa Booska laga helay - qolalka in uu lumiyay muddo ku dhow laba boqol oo sannadood. Kuwani qol mugdi cajiib ah ayaa la dhisay ee qadiimiga ah dhagax Edinburgh, dahaadhay cusubi, meelaha dabka lagu shito, iyo 18khamri th-qarnigii booska. haddii aadan aaminsani in lagu nagaan safar taas oo ka dhigaysa taariikhda Edinburgh runtii xiiso leh. Tani gebi ahaanba waa u qalantaa ah 13 sunuud (11 haddii aad tahay arday!).
Sidaas badan in Tareenku Tours Yurub in ay qaataan, sidaas darteed meelo badan oo ah inuu dhaco jacayl leh! Waxaan aad u bixiyeen milicsi gaaban ee waxa aad soo booqan karin sida Travel Ardayga by Tareenku. Booqo bogga Badbaadinta A Tareenka oo aad u safarto meel kasta oo qalbigaagu ka doonayo Yurub.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstudent-travel-by-train%2F- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / fr si / ru ama / luqadaha TR oo dheeraad ah.
#madadaalo europeantravel arday ardayda TrainStation tareen safarka safarka